Homeसमाचारबल्ल रवी लामिछानेले सिधा कुरा वि’वाद बारे मुख खोले, म यो ल’डाइँ जित्न चाहन्छु साथ दिनुस (हेर्नु’होस् भिडियो)
February 6, 2021 admin समाचार 5290
न्यूज २४ टेलिभिजनवाट रवी लामीछाने वा’हिरिएपछि टेलिभिजन मालिक अनिल जोशी र लामीछानेका विचमा ‘सिधाकुरा जनतासँग’ को ट्रेडमार्कका विषयमा सम’स्या देखिएको छ । चर्चित पत्रकार, सफल प्रस्तो’ता तथा राम्रो फ्यान र फलोअर्स भएका लामिछानेले ‘सिधा कुरा जनतासँग’ लाई थप परिस्किृत गरेर लिएर आउने वा’चा गरेका छन् । तर, टेलीभिजनले सोहि का’र्यक्रमलाई निरन्त’रता दिन थालेको छ ।
रवि लामिछानेको भदौ ८ गतेको अ’न्तिम एपिसोडपछि कार्यक्रम ‘सिधा कुरा जनतासँग’ वन्द हुने सो’चिएको थियो । तर, संस्थाले सम्झना भुजेललाई नयाँ प्रस्तो’ताको रुपमा नियुक्त गरेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । चलिरहेको प्रस्तो’ता वाहिरिएपछि नयाँ प्रस्तोतालाई अबसर दिनु राम्रो पक्ष हो तर, रवीको तुलनामा सम्झानाको प्रस्तुती फिक्का देखिएको भन्दै प्रति’क्रिया पनि सुरु भएका छन् ।
यसै क्रममा रवि लामिछाने ले सिधा कुरा जनता संग को विवाद बारे पहिलो चो’टि मुख खोलेका छन् । मिडिया संग अन्त’रक्रिया गर्दै रविले आफू यो ल’डाई अलि फरक तरिकाले जित्ने भन्दै बोलेका छन् । रवि लामिछाने का अ’नुसार हरेक चोटि आफु बोलेर ल’डाई जितिरहेको तर यो पल्ट नबोली लडाई जित्ने उल्लेख गरेका छन् । यो पल्ट नबोली ल’डेको ल’डाई मा साथ दिन र बुझिदिन जनता लाई आग्र’ह समेत गरेका छन् ।
योसँगै कार्यक्रमको टेडमार्कका विषयमा ठुलै सम’स्या हुने आशंका गर्न थालिएको छ । पत्रकार प्रेम वानियाँले पनि यो विषयलाई आं’कलन गरेका छन् । लामिछाने र टेलीभिजनका तर्फवाट तयार पारिएको विज्ञापनलाई सामाजिक संजालमा राखेर उनी लेख्छन्–‘म चाहन्थें, यतिसम्म द्व’न्द्व नभइदिएको भए हुन्थ्यो !
तर अब त यो कार्यक्रम नै का’नुनी विषय बन्न पुगेछ ! मेरो साथी रवी र ‘मेरो’ टीभी न्युज २४ दुबैको जय होस् । जय स्वा’भिमान !’रवि लामिछाने का साथ डा सुरेन्द्र केसी ले समेत आफ्नो विचार प्रस्तुत गरेका छन् भने रवि लामिछानेले सुरेन्द्र केसी को ता’रिफ गर्दै आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् । – इताजा खबरबाट
April 8, 2021 admin समाचार 4479
March 3, 2021 admin समाचार 5655
October 10, 2020 admin समाचार 9565
संस्कृति, पर्यटन तथा नाग’रिक उड्डयन मन्त्री योगे’श भट्ट’राईलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ ।उनले सामाजिक संजाल फेसबुकमा आ’फूलाई कोरोना पुष्टि भएको जान’कारी दिएका हुन् । उनले आफ्नो सम्प’र्कमा रहेका सबैलाई सर्तक रहन पनि अनुरोध